Muddada Maareynta Tayada | GIS
Ku saabsan GIS
Agaasimayaasha iyo maareeyayaasha aragtidooda
Kontroolka tayada alaabada
Baadhitaanka alaabada warshadaha
Hanti dhowrka alaabada
Naqshadeynta, sameynta iyo xaqiijinta cabirka
Maamulka alaabada & horumarka
Qiimaynta shirkadda ganacsiga
Baadhista & u fiicnaanshaha nidaamka maaraynta
Maamulka tayada mashruuca
La-talinta injineernimada tayada leh
La-tashiga Mas'uliyadda Bulshada
Aqbalaada soo iibsiga dowlada
Aqbalitaanka Alaabada Beeraha
ANSI iyo AQL
Ku saabsan warbixinnada
Muddada Maareynta Tayada
Ereyga Maareynta Tayada] Muxuu yahay ISO?
ISO (Ururka International forStandardization) waa urur caalami ah oo ka kooban heerarka heerarka qaran (xubnahooyinka ISO). Shaqada diyaarinta heerarka caalamiga waxaa caadi ahaan laga fuliyaa gudiga farsamada ee ISO. Hay'ad kasta oo xubin ka ah oo xiiseynaysa mowduuc guddi farsamo loo aasaasay waxay xaq u leedahay inay u soo gudbiso guddigaas. Hay'adaha caalamiga ah, kuwa dowliga ah iyo kuwa dowliga ah, oo kaashanaya ISO, iyaguna waa ka qeyb qaataan shaqada. ISOcollaborates waxay si dhaw ula shaqeysaa Guddiga farsamada ee elektiroonigga ah ee caalamiga ah (IEC) dhammaan arrimaha ku saabsan dejinta farsamada elektiroonigga.
Ereyga Maareynta Tayada] waa maxay kormeerka?
Waxqabadka sida cabiraada, baarista, tijaabinta hal ama in kabadan astaamo shey ama adeeg, iyo isbarbardhiga ciladaha shuruudaha la cayimay si loo cadeeyo in is waafajinta lagu khalday astaamo kasta
Ereyga Maareynta Tayada] waa maxay kormeerka asalka ah?
Baadhitaanka ugu horeeya ee wax badan iyada oo la raacayo qodobbada qaybtani ee ISO 2859.
Ereyga Maareynta Tayada] waa maxay kormeerka astaamaha?
Baadhitaanka oo shaygu yahay mid si fudud loogu kala saarayo sida isku-dubbaridid ​​ama u-kala-jebin la’aan marka loo eego shuruudo cayiman ama shuruudo cayiman, ama tirada is-waafajinta sheyga ayaa la tirinaayaa. Tiro dad aan akhlaaq lahayn boqolkii shey.
Muddada Maareynta Tayada] waa maxay shayga?
Shayga waxa si shaqsiyan lagu sharixi karo loona tixgalin karo, TILMAAMAHA:
shey jireed; cadad shay qeexan; adeeg, hawlo ama geedi socod; urur ama qof; ama waxoogaa isku jira ayaa jira.
Ereyga Maareynta Tayada] waa maxay isbadal la’aan?
Oofin la'aanta shuruudaha la cayimay:
XAALADAHA 1 Xaaladaha qaarkood cayiman cayiman oo loo baahan yahay oo la mid ah shuruudaha adeegsiga macaamiisha (eeg cillad, 3.1.6). Xaaladaha kale ma dhici karaan, iyagoo ka sii yaraanaya mid fudud, ama xiriirka saxda ah ee ka dhexeeya labada si buuxda looma oga ama loo fahmayo.
XASUUSNO 2 Awood-dardeyn guud ahaan waxaa loo kala saari doonaa khalad heerka ay gaarsiisan tahay halista sida: Nooca A: kuwa aan-la-koobi karin nooca loo arko inay yihiin kuwa welwelka ugu sarreeya qaba; aqbalida muunad noocyada noocan oo kale ah waa in lagu meeleeyaa qiime xaddidan oo tayo xaddidan leh; Fasalka B: kuwa noocan ah ee loo arko inay leeyihiin heerka hoose ee walaaca hoose; sidaas darteed, kuwan waxaa lagu meelayn karaa xadka aqbalaada tayada sare ee qiimeyntaan kuwa fasalka fasalka A ka yarna fasalka C, haddii fasalka saddexaad uu jiro, iwm.
XUSUUSNOW 3 Ku darista astaamaha iyo casharada isqarxinta guud ahaan waxay saameyn ku yeelan doontaa itimaalka guud ee aqbalaadda sheyga.
XASUUSNOOW 4 Tirada fasalada, ku meeleynta galaaska, iyo doorashada xaddiga tayada aqbalaada fasal kasta, waa inay ku habboonaan karaan tayada tayada ee xaalada gaarka ah.
Ereyga Maareynta Tayada] maxaa cillad ah？
Ku-meel-gaadhka ah ee loo baahan yahay adeegsiga loo baahan yahay
AKHRIS 1 Ereyga "cillad" ayaa ku habboon in la isticmaalo marka lagu qiimeeyo astaamaha tayada badeecad ama adeeg marka loo eego qaab adeegsiga (marka la barbar dhigo khafiifinta qeexitaanka).
XASUUSNO 2 Maaddaama ereyga "cillad" uu hadda leeyahay macno qeexan sharciga dhexdiisa, looma adeegsan doono sidii eray guud ahaan.
Ereyga Maaraynta Tayada] waa maxay shay aan ahayn qaabayn tem
Shayga oo leh hal ama in kabadan oo qaabab la'aan ah
XUSUUSIN Waxyaabaha aan qaabaysnayn ayaa guud ahaan lagu kala saari doonaa heerka ay ka culus yihiin sida:
Heerka A: shay ay ku jiraan mid ama in ka badan oo aan ahayn isku-dhafnaan ah ee heerka A oo waliba laga yaabo inuu ka koobnaado noolasha aan ahayn fasalka B iyo / ama heerka C, iwm.;
Ereyga Maareynta Tayada] waa maxay boqolkiiba aan-habbooneyn?
(Tusaale muunad ah) boqol jeer tirada walxaha aan-qaabaynayn ee muunadda ay u qaybsanayso cabirka muunadda, iyada oo loo maro: (d / n) 100 halka
d: waa tirada walxaha aan-
n: waa cabirka saamiga
Ereyga Maareynta Tayada] waa maxay mas'uulka mas'uul ah?
Fikradda loo isticmaalay in lagu ilaaliyo dhex-dhexaadnimada qaybtan ISO 2859 (ugu horreyn ujeeddooyin cayiman), iyadoo aan loo eegin Haddii ay soo jiidanayso ama ay codsatay qaybta koowaad, labaad ama saddexaad
SADADKA mas'uulka mas'uulka ka ah wuxuu noqon karaa:
a) Waaxda tayada gudaha hay'adda wax soo saare (qeybta koowaad);
t) Qofka wax iibsada ama ururka wax soo iibsiga (qeybta labaad);
c) Xaqiijin madax banaan ama maamulka shahaadada (qeybta saddexaad);
d) mid ka mid ah a), b) ama c), kaladuwanaashaha shaqada (eeg Xusuusin 2) sida lagu qeexay heshiis qoraal ah oo ka dhexeeya labada dhinac, tusaale ahaan dukumenti u dhexeeya alaab-qeybiye iyo iibsade.
Ereyga Maareynta Tayada] waa maxay badan?
Qaddarka aan dhammaadka lahayn ee wax soo saarka, alaabada ama adeegga, oo la isugu soo ururiyey
MACLUUMAAD Imtixaanka kormeerka wuxuu ka koobnaan karaa dhowr qaybood ama qaybo ka mid ah dufcadaha.
Erayga Maaraynta Tayada] waa maxay cabirku?
Tirada shey aad u fara badan
Ereyga Maareynta Tayada] waxa muunad ah？
Hal ama wax ka badan oo laga soo qaatay wax badan oo loogu talagalay in lagu bixiyo macluumaad badan.
Maamulka Tayada dheer] waxa sampling qorshe?
Iskujira ee size muunad (s) in loo isticmaalo iyo shuruudaha dhoweynayo badan la xidhiidha
FIIRSO 1 Qorshe sampling hal waa isku darka of size muunad iyo aqbalaada iyo lambarada diidmada.
Qorshaha muunad qaadista laba-labole ah waa isku-darka laba cabbir muunad iyo aqbalaad iyo lambarro diidmo muunadda koowaad iyo muunadda iskudarka ah.
XUSUUS 2 Qorshaha muunad ururinta kuma jirto qaanuunnada sida loo qaadayo muunadda.
Ereyga Maareynta Tayada] waa maxay kormeerka caadiga ah?
Adeegsiga qorshe sanbal qaadis oo leh qiimeyn aqbalaad ah oo loo habeeyay si loo xaqiijiyo soo-saaraha suurtagal sare oo aqbalaad ah marka celceliska habka badan uu ka fiican yahay xaddiga tayada aqbalida
XUSUUS: Kormeerka caadiga ah ayaa la adeegsadaa marka aysan jirin sabab looga shakiyo in celceliska habka (3.1.25) wuu ka duwan yahay
heerka la aqbali karo.
Ereyga Maareynta Tayada] maxaa loo adkeeyay kormeerka?
Adeegsiga qorshe muunad qaadis oo leh qiimeyn aqbal oo ka adag tan qorshaha qorshaha
kormeerka caadiga ah
XUSUUS: kormeerka adag ee la damiyo marka natiijada baaritaanka tirada la sii go'aamiyey ee tiro badan oo isku xigta ay muujineyso in celceliska habraaca laga yaabo inuu ka liitaa kan AQL.
Ereyga Maareynta Tayada] Muxuu yahay qorshaha sanbal qaadashada?
Isku-darka qorshooyinka ururinta ururinta iyo qawaaniinta loogu beddelayo hal qorshe ilaa mid kale
Erayga Maareynta Tayada] Muxuu yahay nidaamka qayb ururintu?
Uruurinta qorshayaasha qayb ururinta, ama noocyada qayb ururinta, midkasta oo leh qawaaniin u gaar ah oo loogu talagalay beddelaada qorshayaasha, oo ay weheliso habraac u ururinta saamiga oo ay ka mid yihiin qawaaniinta lagu dooran karo qorshayaasha ku habboon ama qorshayaasha ku habboon.
XUSUUSNO qaybtaan ISO 2859 waa nidaam muunad sambal ah oo lagu soo koobay cabbirro fara badan, heerar baaritaan iyo AQLs. Saambal
nidaam loogu talagalay qorshayaasha LQ ayaa lagu bixiyaa ISO 2859-2.
Floor10, Dhismaha C, Unis Sci-Tech Park, Lambarka 30 Wulongjiang Road, Aagga Farsamada Sare, Fuzhou, Fujian, China
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2022: Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay. Talooyin - Hot Products - Sitemap - amp Mobile
Xarafka Production Check , Full Online Kormeerka , In Hab-baadhista , Loading Weelka Kormeerka , Qiimaynta Factory , Saddexaad xisbiga Inspection ,